राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन पुगेर नेपालको बदनाम ! गर्न नहुने काम भएपछि …::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन पुगेर नेपालको बदनाम ! गर्न नहुने काम भएपछि …
काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा हाल चीनमा छिन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका बेला भ्रमण टोलीका सदस्यले गर्न नहुने काम गरिरहेको खुलासा भएको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिको विदेश भ्रमणका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रोटोकल निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । शिष्टाचार महापालका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका बेला के गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै प्रोटोकल उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको कुटनीतिक भेटघाटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै स्पोर्टस् जुत्ता लगाएका छन् । कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल परराष्ट्रमन्त्री आफैले नगरेको देखिएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारी चीनको विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि भण्डारीभन्दा अगािड अर्का एकजना नेपाली ओर्लिएको समेत देखिएको छ । कुटनीतिक मर्यादाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका बेला अगाडि अरु व्यक्तिहरु हिड्न नहुने मान्यता रहेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा अघि अघि एकजना नेपाली ओर्लिएका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमै हुने औपचारिक कार्यक्रमका लागि ड्रेसकोड निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने कुनै–कुनै कार्यक्रममा ड्रेसकोड नमिलेको भन्दै सहभागीलाई फिर्ता गराउने समेत गरिन्छ ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको समयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नै कुटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगर्दा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
कुटनीतिक मामिला जानकार मधुरमण आचार्यले भने, ‘विशिष्ट व्यक्तिको राजकीय भ्रमणमा सहभागी हुनेहरूलाई प्रोटोकलको जानकारी नगराउँदा समस्या देखिएको हुनसक्छ । प्रोटोकलको ख्याल नगर्दा देशकै बद्नाम समेत हुन सक्छ ।’
विप्लव समूहले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति, सरकारलाई खतरा!
धनगढीमा शक्तिशाली बम विष्फोट हुँदा पाँच जना घाइते, घटनास्थलमा भेटियो पेस्तोल